Filoha Bush Nitsidika An’i India sy i Pakistan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Aogositra 2017 19:40 GMT
Niteraka tabataba malaza teo amin'ny media sy teo amin'ireo bilaogera ny fitsidihan'ny filoha. Manana lisitra misy ireo rohim-baovao sasany aho. Toa nanjary lohahevitry ny adihevitra teo amin'ireo bilaogera Amerikana ny tsy fitsidihan'ny Filoha tao Taj Mahal. Nilaza i Rich fa “nankany India i George.” Manontany i Delilah Boyd hoe “ Tianao ve ny ho tiavina sa tevatevaina?” Raha naneho hevitra tao amin'ny Travels with George kosa i Morse of Media Needle fa mety ho ao amin'ny Filoha miaraka amin'ny vaovao antsipiriany ny governora.
John Mather indray nizara ny sarin'ny Taj, ary nilaza fanantenana mahafinaritra ho an'ny mpitarika mpizahatany fa hitsidika an'i Taj Atoa Bush, tahaka ny nataon'i Bill Clinton taona vitsy lasa izay. Ary indro ny voalazan'ny Royally Cranked momba ny fitsidihana.
Namoaka lahatsoratra mahafinaritra momba ny fitsidihan'ny Filoha i Jeevan avy any Chennai, ary nanoratra ny antony mahatonga ny antoko ankavia manohitra ilay fitsidihana. Arun koa manome ny heviny momba ny fitsidihan'ny filoha ao India.
Nahitana ireo bilaogera sasany manao fihetsiketsehana ny fitsidihan'ny filoha tao Pakistana. Nilaza i Arzoo fa Tsy Mila An'Andriamatoa Bush. Miresaka momba ny sarintany vaovaon'i Kashmir kosa i Ayesha fa mivezivezy manodidina ny ambasady Pakistaney araka ny tatitry ny gazety Daily Times. Tharwa Community indray manana lahatsoratra momba ny fomba tokony handrisihan'ny filoha Bush hamarana ny fitondrana miaramila ao Pakistan.
15 Novambra 2020Azia Atsimo
12 Oktobra 2020Azia Atsimo